DataNumenIsixhobo soPhuculo lweSoftware yaBaphuhlisi
Isoftware yoPhuculo lweSoftware (SDK) yaBaphuhlisi
Kwimveliso nganye yesoftware yokufumana kwakhona idatha, sikwabonelela ngokuhambelana ikhithi yophuhliso lwesoftware (SDK). Abaphuhlisi banokubiza usetyenziso lwenkqubo yesicelo (API) isebenza kwi-SDK yokulawula inkqubo yokulungisa ngokuthe ngqo kunye nokudibanisa itekhnoloji yokubuyisa idatha engenakuthelekiswa nanto kwiimveliso zesoftware ngaphandle komthungo.
Iphakheji ye-SDK ibandakanya iifayile ze-SDK DLL, amaxwebhu kunye neekhowudi zesampulu kwiilwimi ezahlukeneyo zenkqubo yokusebenzisa ii-API.
Abaphuhlisi banokwenza inkqubo kwi:
IMicrosoft Visual C ++ kubandakanya iC # kunye .NET
IMicrosoft Visual Basic kubandakanya iVB .NET
Umakhi waseBorland C ++
Naluphi na ulwimi olusebenzisa inkqubo yokuxhasa ubizo lwe-DLL
Zintathu iintlobo zeemodeli zelayisensi ze-SDK:
Iphepha-mvume lomphuhlisi: Vumela inani elithile labaphuhlisi ukuba basebenzise i-SDK ukuphuhlisa usetyenziso lwabo. Umzekelo, ukuba umntu uthenga ilayisenisi yonjiniyela omnye, ngumphuhlisi omnye kuphela onokusebenzisa i-SDK ukuphuhlisa usetyenziso. Nceda uqaphele AKUKHOTHWA usasaze i-SDK DLL kunye nesicelo sakhe ngaphandle kokuba uthenge iilayisensi zexesha lokusebenza okanye iilayisensi zasimahla ezichazwe ngezantsi.
Iphepha-mvume lokuqhuba: Vumela inani elithile le-SDK DLLs ukuba lisasazwe kunye nesicelo. Umzekelo, ukuba umntu uthenga iilayisensi zexesha lokubaleka ezili-10, emva koko unokuhambisa kwakhona iikopi ezili-10 ze-SDK DLLs kunye nesicelo sakhe.
Iphepha-mvume elingenaRoyalty: Vumela inani elingenamda le-SDK DLLs ukuba iphinde isasazwe kunye nesicelo. Oku kuyafana nenani elingenamda leelayisensi zexesha lokusebenza.
Ndiyacela Qhagamshelana nathi ukufumana ulwazi oluthe kratya okanye ucele ingxelo yovavanyo yasimahla yephakheji ye-SDK.
DataNumen Archive Repair 3.3 ikhutshwa nge-25 kaDisemba, 2020